MIUI V6 nyochaa mmelite nke Xiaomi Kit Kat 4.4.4 | Gam akporosis
Otu n'ime ihe ị na-eme nke ọma Xiaomi, na mgbakwunye na otu o si bụrụ ihe ezi uche dị na ya ma mara na ọ bụ n'ichepụta n'ezie ịrịba gam akporo ọnụ na na a karịa gbanwee price. Ọ dị n'ihe niile metụtara mmelite ndị ọrụ nke njedebe gị niile, ọnụ ndị natara mmelite ọrụ na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo na iji ahazi ahaziri ahazi nke nwere MIUI oyi akwa kachasị maka nke ọ bụla n'ime akara ndị a nke akara ndị China mepụtara ugbu a bụrụla nnukwu ntụpọ na mpaghara gam akporo.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo etinyere na nkụnye eji isi mee nke isiokwu a, anyị nwere mee ka Xiaomi RedMi Cheta 4G gaa na Android 4.4.4 site na MIUI V6, na anyị na-agwa gị akụkọ niile anyị nwere ike ịhụ na nke a ohuru ohuru ohuru ohuru MIUI V6.
N'etiti isi okwu iji mee ka ọ pụta ìhè, ka m na-egosi gị nke ọma na vidiyo vidio ahụ, anyị nwere ike igosipụta ya ohuru translucent imewe nke ngosi mmanya, ọhụrụ multitasking, nchịkọta ọhụrụ site na udi na ntọala ntọala ma ọ bụ ngụkọta mmezi nke ngwa igwefoto na-enye ya mmetụ dị ugbu a karịa na nke ochie nke ngwa ahụ.
Na mgbakwunye na mmeghari nke ngwa niile nke Xiaomi nke aka ya, igwefoto, egwu, nchekwa, gallery, vidiyo, redio FM, compass, wdg, wdg, anyị nwekwara ike ịchọpụta etu esi etinye ngwa ndị a. agbanweela na nke kachasị iji nweta ọtụtụ ihe ndị a na-emetụ n'ahụ nke akara ndị China. Dịka ọmụmaatụ na n'okwu metụtara anyị RedMi Rịba ama 4G, anyị nwere ike ịlele otu ogo ogo nke igwefoto ka na-abawanye ọkwa ekele maka ntọala ọhụrụ etinyere na mmelite a MIUI V6 gam akporo 4.4.4 Kit Kat.
Na nkenke, dịka m kwurula na vidiyo, a nnukwu mmelite nke Xiaomi tinyere na MIUI V6 ọhụrụ a Nke ahụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụlarịrị otu n'ime nhazi nke ọkacha mmasị m, ugbu a, site na ihu ihu ọhụrụ a, o doro anya na ọ nweelarị arụmọrụ na arụmọrụ sistemụ na ịchekwa batrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Anyị nwalere ụdị ọhụrụ nke Miui V6 na gam akporo 4.4.4 Kit Kat
Luis Nwachukwu (@chukwunyere) dijo
Kedụ ka ị ga - esi gbanye ngwa dị ka whatsapp, gmail, wdg ...?
N'ihi na ọ bụrụ na emechiri ha, anabataghị ozi ma ọ bụ ozi ịntanetị, ma ọ bụ yabụ ọ dị ka m ghọtara.
Ikekwe na rom nke miui.es na anaghị eme ọzọ.
Ọ bụ na m na-enwe nsogbu na nke ikikere, yana oke nhọrọ nke ekwentị a nwere.
Zaghachi Luis Villaverde (@phluisma)
Emebeghị m ihe ọ bụla ma ana m anata ọkwa niile site na ngwa, Hangouts, Gmail, WhatsApp, Telegram, wdg, wdg.
Yovani Agueta dijo
nwere ike itinye ya dị ka owu mmiri na s5 |
Zaghachi Yovani Argueta
Samsung Gear VR nwere ike zụta ugbu a na Best Buy maka $ 199
Nyochaa ụdị akwụkwọ ọ bụla na SimplyScan